China Powder spraying machine for laminated windshields abakhiqizi kanye nabaphakeli | Fuzuan
Uhlobo: Imishini yokwenza i-Glass powdering
Ingilazi Iyadingeka: Amawindshields anelayini (amashidi angawodwa) ngaphambi kwenqubo yokugoba
Inombolo yemodeli: FZGPM-A
Usayizi Wengilazi Omkhulu: 2000*1300 mm Ubuncane Bengilazi Usayizi: 800*300 mm
Ubukhulu bengilazi: 1.5mm – 6 mm
Isikhathi somjikelezo: 15s/pc
Ukusetshenziswa: Fafaza izimpushana zamawindi omoya ukuze uhlukanise izingcezu ezi-2 zengilazi.
I-automotive glass powder system.
Ekucutshungulweni kwangaphambili kwezimoto kokukhiqizwa kwengilazi ye-windshield, izibuko zifafazwa ngama-powders, asetshenziselwa ukuhlukaniswa kwezibuko zangaphakathi nezangaphandle. lo mshini wokufafaza oyimpushana wama-windshields aminated uklanyelwe ngokukhethekile ukufutha ama-powders ngaphambi kokugoba okushisayo okushisayo, okunganciphisa noma kuvimbele izingcezu ezimbili zenduku yengilazi kanye nasenqubweni yokugoba ingilazi kanye ne-optical scrap.
Ngemva kokugeleza kwengilazi emshinini wempushana, inzwa ibona ingilazi kanye nesibhamu se-spray siqala ukufutha i-powder ngokusho kwesikhathi esimisiwe, bese sigeleza emshinini wamakhethini omoya oshisayo, yomisa impushana emanzi endaweni yengilazi. Umshini wokuhlanganisa, umshini wamakhethini omoya oshisayo kanye nesistimu yokuvuselela impushana yohlobo lokumunca isimo sokusebenza okuqhubekayo.
IZINHLELO ZOKUFAKA ISICELO AMA-EJENSI AHLUKANISA
Kubalulekile ukuthi abakhiqizi bezingilazi baqinisekise ukuthi ingilazi ifafazwe ngokulinganayo. Uma i-powder eningi isetshenziswa, ngeke nje yandise izindleko zokukhiqiza, kodwa futhi ibangele izinkinga zenqubo ephansi, futhi idinga ukuhlanza ingilazi ngaphambi kwenqubo yokugoba. Uma ukumbozwa kwempushana kunganele, amakhasimende angase enqabe ukusebenzisa amapuleti engilazi ngenxa yamabala noma imihuzuko noma amapuleti engilazi anamathelane.
I-FUZUAN inikeza imigqa yomkhiqizo ehlukene evumelana ngokuphelele nenqubo yakho.
Qedela amasistimu nezixazululo ezikhethekile
Ukubuyisela kabusha, ukusevisa, kanye nokugcinwa emthonjeni owodwa.
Izinhlelo zokusebenzisa impushana yengilazi ye-Auto.
I-Automotive glass windshield processing
Ukufafazwa okuyimpushana kwamapuleti engilazi kanye nezikrini zomoya zemoto kusetshenziswa amasistimu ombhobho.
Isikhathi somjikelezo se-FZGPM-A: 12s/pc (Kwenziwe ngokwezifiso)
Lo mshini wempushana wakhiwe ikakhulukazi
●Isihambisi sohlobo lwesondo
● Ibhokisi lesifutho sempuphu
● Uhlelo lokufafaza ngempuphu
●Isistimu yokuvuselela impushana
● Uhlelo lwamapayipi omoya
● Uhlelo lokulawula ugesi
Ngisho nokusetshenziswa kwempushana phezu kwayo yonke indawo engilazi
Ukulungiswa okuzenzakalelayo kobuningi bempushana ukuya kusivinini somugqa/ububanzi bengilazi
Ayikho inkokhelo eyengeziwe ye-electrostatic edingekayo
Ukuqinisekisa ikhwalithi ngokusebenzisa "ukwakheka kwemihuzuko" okuncishisiwe
Izinhlelo zokusebenza: Okuqondile, okuvundlile, phezulu, nangaphansi
Ukuxutshwa kwempuphu namanzi kwenziwa ethangini elivaliwe. Lokhu kunikeza izici ezinhle zempushana kanye nekhono lokugeleza
Ukushintsha kwempushana kungenzeka kungakapheli imizuzu embalwa - ngaphandle kokulahleka kwempushana
Ubukhulu Bengilazi Usayizi 2000*1300 mm
Ubuncane Bengilazi Usayizi 800*300 mm
I-Powdering Ububanzi obuphumelelayo 1300 mm
Ukujiya Kwengilazi 1.5mm-6 mm
Ukuphakama kweConveyor 950mm +/- 50 mm (Kwenziwe ngokwezifiso)
Isikhathi somjikelezo 15 s/pc (Kwenziwe ngokwezifiso)
Amandla Aphelele 145kw
I-Voltage/Frequency 380V/60Hz 3ph (Okwenziwe ngokwezifiso)
Umoya ocindezelwe 4-6 imigoqo
Amanzi Angenawo Amaminerali <8us/sq.cm
Izinga lokushisa 18℃~35℃
● Amamotho ashayelwa aneziguquli ezishintshashintshayo.
● Uhlaka oluyinhloko lwenziwe ngezinto ze-SS304 ezimelana nokugqwala.
● Izingxenye zokudlulisa iketango le-sprocket zinesivikelo sekhava yokuphepha.
● Amasondo egunjini lokufutha ngempushana elifakwe ibhulashi, okukhipha umpushana emasondweni.
● Fafaza izibhamu ebhokisini lesifutho esiyimpuphu, ngasinye sifakwe isethi yevalvu yokulawula umoya ozimele.
● Isethi ngayinye yesibhamu sesifutho esinemisebenzi yokulungisa yobuningi bempushana, ukujiya kwempushana, i-engeli, isiqondiso.
● Kukhona isethi yethangi lokugaywa kabusha okuyimpushana ngaphansi kwebhokisi lesifutho sempushana.
Okwedlule: Umshini wokuwasha ingilazi ovundlile wengilazi eyisicaba yezimoto
Olandelayo: Umshini wokuphrinta wengilazi wamaWinshields